Maxkamadda Laascaanood Oo Bur-burisay Khamri Tirro Badan | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Laascaanood (SDWO.com): Maxkamadda gobolka Sool ayaa maanta xukuno ku riday laba nin oo ku eedaysnaa in ay ka ganacsanayeen maandooriyaha Khamriga, kuwaasi oo lagu soo qabtay hawl-gal ay dhawaan sameeyeen ciidamadda boolisku.
Khamrigaasi oo dhamaa 42 Litir, ayaa lagu bur-buriyay barxadda hore ee maxkamadda gobolka Sool, ee magaaladda Laascaanood, iyadoo loo soo qabtay Khamrigaasi laba eedaysane, kuwaasi oo ay maxkamadu ku xukuntay midkiiba saddex sanadood oo xadhig ah iyo ganaax lacageed.
Waxaana goobtii lagu bur-buriyay Khamrigaasi goob joog ka ahaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka Sool iyo bahda gar-soorka Laascaanood iyo sidoo kale taliyaha qaybta ee ciidamadda booliska gobolak Sool gaashaanle dhexe Ibraahim Jaamac Daad.
Gar-soorihii xukunkaasi riday, ayaa sheegay in eedaysaneyaashaasi lagu xukumay midkiiba saddex sanadood oo xadhiga ah. Waxaanu gar-sooruhu ka codsaday bulshadda in ay ciidamadda amaanka la soo socodsiiyaan cid kastoo ku hawlan in ay fasahaadiso dadka.
Gar-sooraha maxkamadda gobolka Sool oo arrimahaasi ka hadlayay-na waxa uu yidhi “Eedaysaneyaasha, midkiiba waxay maxkamadu ku xukuntay saddex sanno oo xadhig ah. Sidaas darteed waxaanu dadweynaha u sheegaynaa in cid kasta oo isku dayda in ay dadka fasahaadiso, ama in ay amniga khal-khal geliso, waxaanu bulshadda ka codsanaynaa in ay u soo sheegaan ciidamadda booliska”.
Sidoo kale Xeer ilaaliyaha maxkamadda gobolka Sool, ayaa isna halkaasi ka hadlay waxaanu yidhi “Saaka, waxaanu halkan ku gubnay Khamrigii lagu soo qabtay labadda eedaysane. Waxaa nasiib wanaag ah oo aan hore taariikhda Laascaanood uga dhicin in hooyo wiilkeedii oo Khamri ganacsi uu ka ganacsanayay u keenay, si ay ugu qariso, in ay ciidamadda booliska u tagtay oo ku soo war-gelisay in wiilkeedii uu Khamri ka ganacsanayo”.
“Laba arrimood ayaan soo jeedinayaa: in la ganaaxo eedaysaneyaasha iyo gaadiidka lagu soo qabto Khamriga. In lacagta ganaaxa ah ee laga qaado dadka lagu soo qabto Khamriga in laga daayo qasnadda dawladda ee lagu shubayo, oo lagu dhiiri geliyo ciidamadda booliska ee arrimahaasi ka hor tegisteedda ku hawlan.
Loona siiyo dhiiri gelin askarta soo qabata Khamriga si ay askarta kale ugu daydaan. Taana waxaan ka codsanayaa maxkamadda gobolka”ayuu yidhi Xeer ilaaliyaha maxkamadda gobolka Sool.
Taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sool, oo isna goobtaasi ka hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay tiradda Khamrigaasi iyo eedaysaneyaashii loo soo qabtay.
“Waxaa saaka lagu fuliyay xukunkii maxkamadda 42 Litir oo Khamri ah. Khamrigaasi oo ay soo qabteen ciidamadda boolisku, iyagoo kaashanayay qoyskii uu ka dhashay wiilkii doonayay in uu Khamrigani ka ganacsaddo. Waxaanan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa waalidkii dhalay wiilkaasi sida ay isaga soo qabteen waxaasi xaaraanta ah ee gurigoodda lagu qarsaday” ayuu yidhi gaashaanle dhexe Ibraahim Jaamac Daad.
Dhinaca kale taliyuhu wax auu dig-niin adag u diray cid kastoo ka ganacsata mukhaadaraadka in ay la kulmi doonaan ciqaab adag, isagoo xusay in ciidamadda boolisku ay diyaar u yihiin sidii ay ula dagaalami lahaayeen joojinta ka ganacsiga mukhaadaraadka.
Gaashaanle dhexe Ibraahim Jaamac Daad, oo arrimahaasi ka hadlayay-na wax auu yidhi “Waxaan u soo jeedinaynaa guud ahaanba bulshadda gobolka Sool gaar ahaana kuwa magaaladda Laascaanood, waxaanu ka codsanaynaa in ay la soo socod siiyaan ciidanka booliska meel kasta oo ay ku arkaan in lagu iibinayo maan-dooriyaha Khamriga.Ciidanka booliskuna wuxuu u taagan yahay, in uu la dagaalamo mukhaadaraadka, gaar ahaana Khamriga iyo wixii la mid ah.
Kan maanta aan bur-burinayna waa kii u horeeyay, waxaananu u sheegaynaa cidii kale ee falkaasi u guddo jirta ama ku tallo jirta in ay samayso ama ka shaqaysata in ay ka tanaasulaan, hadddii kale-na ay mudan doonaan, lana kulmi doonaan, ciqaabtan oo kale ah iyo mid ka sii weyn. Intaasi waa dig-niin, dig-niintaasi ayaananu u sheegaynaa dadka mukhaadaraadka ka ganacsadda”.
Isku soo wada duuboo, waa markii u horaysay ee ay maxkamadda Laascaanood xukun noocan ah oo lagu fuliyay eedaysaneyaal lagu soo qabtay maandooriyaha Khamriga ay riddo.
Inkstoo maxkamadaha magaalooyinka kale ee dalka inta badan ay ka dhacaan kiisas dad ku eedaysan in ay Khamri ka ganacsanayeen lagu fuliyo.